Home Kachasị Fakpọsa Ahụ roomlọ Bathlọ Bathlọ Mara Mma VIGA na-ere ụlọ decket n’elu ụlọ ịsa ahụ na-acha uhie uhie na chrome emechara 251100CH
Polygon imewe na-ewu ewu na afọ ndị a, ọ na-eweta ihe ọhụrụ echiche banyere thathroom imewe, na-enwu gbaa chrome okokụre na ọla owuwu mụbara textrue, otu menjuobi na otu oghere echichi afọ ju 90% ezinụlọ kwa ụbọchị na-eji. 40 ~ 100cm mgbanwe eriri mmiri sooks nhọrọ maka iche iche mkpa. H59% ọla kọpa banyere ahụike gị, akara mba ụwa bụ Neoperl areator iji hụ na mmiri echekwara 30%. A pụrụ ịdabere na katrij na-ekwe nkwa afọ 5 na oge 50,00,000 mepere ma mechie. Abịa na ọcha seramiiki ọcha, dị mfe ma pụrụ iche. Gburugburu imewe adabara ma gbaa gburugburu seramiiki efere.
Saleslọ ọrụ VIGA dum na-ere ahịa, nwere ihe karịrị afọ iri na abụọ nwere ọfụma na mbupụ faucets na ngwa ụlọ ịsa ahụ karịa mba iri asatọ. Site na imewe gaa na mmepụta, ụlọ ọrụ VIGA na-enye ọnụahịa asọmpi na ọrụ kachasị mma nye ndị ahịa niile. Izu ahia anyi di ire ahia di elu na Eourpe, North America na South America.
Esemokwu ezinụlọ ZORA serie
Ọla kọpa na-acha odo odo
Mbụ: Ọpụrụiche pụrụ iche ọla n’otu oghere oghere lever ime ụlọ ịsa ahụ na Chrome 8211A0CH
Next: Lavatory Sink Faucets Na Chrome emeputa